FBC - Harargee Bahaatti guddataan waggaa 14 konkolaataa dhaabbatee ture kaasee hoofuun lubbuu namoota sadii akka darbuuf sababa ta’eera
Harargee Bahaatti guddataan waggaa 14 konkolaataa dhaabbatee ture kaasee hoofuun lubbuu namoota sadii akka darbuuf sababa ta’eera
Finfinnee, Amajjii 1, 2009 (FBC) Guyyoota Ayyaanaa sadii darban balaawwan tiraafikaa hedduu kutaalee biyyattii gara-garaa irra qaqqabaniiru.
Naannoo Oromiyaatti balaawwan tiraafikaa namoota 21 lubbuu galaafate kaan baay’ee ammo miidhaa irraan qaqqabsiise mudateera.
Balaawwan naannichatti qaqqaban keessaa Godina Baha Harargee Aanaa Fadis guddataan waggaa 14 konkolaataa dhaabbatee ture kaasee hoofuun darbuu lubbuu namoota sadiif sababa kan itti-ta’e suukaneessaa ture.
Guddataan kun namoota afur irrattis miidhaa qaamaa cimaa qaqqabsiiseera.
Godina Jimmaa Aanaa Goommaatti konkolaataan fe’umsaa nama fe’ee imalaa ture garagalee lubbuun namoota ja’aa wayita darbu namoota sadii irratti ammoo miidhaan qaamaa salphaa ga’eera.
Kibba Lixa Shawaa Aanaa Walisootti konkolaataan galagalee lubbuun namoota ja’aa wayita darbu namoota sadii irra miidhaan cimaa akkasumas namoota torba irra miidhaan salphaa qaqqabeera.
Godina Arsii, Godina Badallee Buunoo, Roobee, Kaaba Shawaa Aanaa Abootee, Gujii Lixaa Aanaa Qaaccaa fi iddoowwan naannoo Oromiyaa kaanittis balaawwan tiraafikaa qaqqabanii lubbuu namoota baay’ee galaafataniiru.
Naannoo Kibbaattis balaawwan lubbuu namoota 16 galaafatan guyyoota sadan darbanitti galmaa’aniiru.
Naannichatti balaawwan tiraafikaa 14 kan qaqqaban yoo ta’u, balaa du’aa kana malee miidhaan qaamaa cimaa 8 qaqqabaniiru.
Oduuwwan Biroo « Manni maree koonistiraakshin indaastirii hundaa’ufi	Kiraa sassaabdummaa fi malaammaltummaarratti mootummaan eenyuyyuu hin dhiisu - Obbo Haaylamaariyaam »